रामचन्द्र र शशांक मिलेर शेखरलाई यसरी हराए, बाहिरियो गोप्य सूचना — Imandarmedia.com
रामचन्द्र र शशांक मिलेर शेखरलाई यसरी हराए, बाहिरियो गोप्य सूचना
काठमाडौँ। नेपाली काग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वको लागि भएको निर्वाचनमा शेखर कोइरालालाई देउवाले अत्याधिक मतान्तरले हराए। यसमा शेखर पक्ष भनिएका नेताहरुको हात रहेको खुलासा भएको छ।
सभापपति पदमा पुनः शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएका छन्। उनी सँग दास्रो चरणको निर्वाचनमा शेखर कोइराला पराजित भएका छन्।कोइरालालाई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधी,
कल्याण गुरुङ सम्मले समर्थन गरेर चुनाव हराए। कोइरालाको हारको कारण त्यत्ति मात्रै नभएर अरु पपनि भएको विश्लेषण सुरु भएको छ।चर्चित राजनितीक विश्लेषक डा. प्रेम शर्माले शेखरलाई,
चुनाव हराउँनुमा मुख्य हात रामचन्द्र पौडेल र शशांक कोइरालाको रहेको बताएका छन्। पौडलले त माइक्रो मानेन्जमेन्ट गरेरै कोइरालालाई हराएको दावी डा. शर्माले गरेका छन्।
सर्वसम्मत सभापतिको उमेदवार बन्न नपाएको झोक पौडेलले फेरेको शर्माले बताए। चुनावको अघिल्लो दिन मात्रै शेरबहादुर देउवा पौडलेको घरमा पुगेको र त्यहाँ पौडेल र देउवा विच सेटिङ भएको डा. शर्माले जिकिर गरेका छन्।
पौडलले मात्रै होइन शशांक कोइराला र सुजाता कोइरालाले पनि डिजाइन गरेर शेखरलाई हराएको उनको मत छ। शंशाक र सुजाताले शेखर माथी वंश घात गरेको आरोप डा. शर्माले लगाएका छन्।
कोइराला भित्र पनि कुन ग्रेडको हो भन्ने चर्को बिषय रहेको भन्दै शेखर कोइराला सी ग्रेडको कोइराला भनेर शंशाक र सुजाताले हराउँने खेल खेलेको शर्माले बताए। सुजाता खुलेरै प्रकाशमानको टिममा लागेकी,
र शंशाकले बाहिर नबोले पनि भित्री रुपमा देउवाकै सपोर्ट गरेको डा शर्माको विश्लेषण छ। शंशाकले कहिल्यै पनि खुलेर शेखरको पक्षमा नबोलेको भन्दै उनले यदि उनीहरु मात्रै खुलेर बोलिदिएको भए,
अवस्था अर्कै आउँन सक्ने डा शर्माको तर्क छ। प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधी त न्युनतम राजनितीक मूल्य र मान्यता बाट समेत स्खलित भएको आरोप डा शर्माले लगाएका छन्।
प्रकाशमानलाई अहिले सामाजिक संजालतिर भेडो भनेर आलोचना गरिरहेको कुरा साँचो भएको भन्दै डा शर्माले सिंहले भेडो प्रवृतीनै देखाएको बताएका छन्। सबैभन्दा बढि पुस्तान्तरणको,
आवाज उठाउँनेहरु नै अन्तिममा देउवा सँग तुमशरणंम गर्न गएको भन्दै अब प्रकाशमान र विमलेन्द्रलाई बाहिर आएर खोक्ने काम बन्द गर्न पनि डा शर्माले चेतावनी दिएका छन्। अब प्रकाशमानहरुले देउवाका,
विरुद्ध चर्को भाषण गर्ने होइन खुरुक्क गएर दुबो राखेर खुट्टा ढोग्ने हो भन्दै डा शर्माले दनक दिएका छन्। चारैतिरको असहयोगका बाबजुत शेखर कोइरालाले ल्याएको भोट निकै अर्थपुर्ण भएको उनले बताएका छन्।
चुनाव हारे पनि शेखरले राजनिती जितेको डा शर्माको तर्क छ। तेस्तै, नेपाली कांग्रेसमा गगन थापाहरुको उदयपछि नेकपा एमालेका सचिव प्रमुख योगेश भट्टराईले दिएको अभिव्यक्तीले सिंगो एमालेमा आशा र उत्साह पलाएको छ।
नेकपा एमालेका सचिव भट्टराईले कांग्रेसमा नयाँ पुस्ता उदयको प्रभाव एमालेमा पनि पर्ने बताएका हुन्। गृहजिल्ला ताप्लेजुङमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भट्टराईले एमालेको नवौं महाधिवेशनको प्रभाव अहिले कांग्रेसमा परेको र कांग्रेसको प्रभाव पनि एमालेमा पर्ने बताए ।
कांग्रेस उपसभापतिमा निर्वाचित धनराज गुरुङ, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माप्रति लक्षित गर्दै भट्टराईले भने, एमालेको नवौं महाधिवेशनमा हामी पनि यसरी नै निर्वाचित भएर आएका थियौं। कांग्रेसमा त्यसको प्रभाव परेको थियो।
कांग्रेसको प्रभाव पनि एमालेमा पर्छ। एउटै धर्तीमा बसेर राजनीति गरिरहेकाले प्रभाव पर्नु स्वभाविक हो। एमाले र कांग्रेस मुलुकलाई अप्ठेरो पर्दा मिलेर त्यसको सामना गर्ने र सहज परिस्थितिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने दुई शक्ति भएको उनले बताए।
यस्तै एमालेले संसद्‍ अवरुद्ध नगरेको पनि उनको जिकिर थयो। सभामुखले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएसम्म यही अवस्थामा रहने नेता भट्टराईको भनाइ थियो। अहिले सभामुखले सञ्चारमाध्यम मार्फत् धम्क्याउन थालेको,
भन्दै उनले यसअघिका सभामुख हुँदा यस्ता समस्या नआउनु र अग्नि सापकोटा हुँदा आउनु सभामुखको असफलता भएको बताए। नेतृत्वदेखि कार्यकता तहसम्म माओवादीको ठूलो समूह एमालेमा भएकाले आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई,
जित सहज रहेको उनको दाबी छ। पार्टीले अबको तीन महिना पार्टी प्रवेश अभियान चलाउने र त्यस अवधिमा एकीकृत समाजवादीमा गएकाहरूलाई फर्काउने उनले बताए।अरुलाई पनि भित्र्याउँछौं,
विशेषगरी एकीकृत समाजवादीमा गएका साथीहरूलाई फर्काउँछौं’ उनले भने। सन् २०२१ एमालेका लागि सकसको वर्ष भए पनि आगामी पुस १५ पछि सुरु हुने सन् २०२२ को वर्ष एमालेका लागि पुनरोदय र पुनर्जागरणको वर्ष हुने भट्टराईले बताए।